‘Raha tsy voarakitra izany, dia tsy nitranga’: Volavolan-dalàna handràra ny fakàna sarimihetsika sy ny sarin’ireo miaramila eo am-perinasa ao Israely. · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Jolay 2018 5:45 GMT
Vakio amin'ny teny English, Español, Français, Italiano, عربي, русский, 日本語, English
Raha lany, dia mety handrara ny fakàna sarimihetsika sy ny sarin'ny miaramila Isiraeliana eo am-perinasa ny ny volavolan-dalàna natolotra. Saripika avy amin'ilay mpisera Flickr Tal King (CC BY-NC 2.0). (CC BY-NC 2.0)
Raha nitondra bulldozer ny polisy Israeliana mba handrava ny tanàna Palestiniana Khan ao al-Ahmar tamin'ny 4 Jolay, dia nihetsika ny vondrom-piarahamonina madinika misy olona 200.
Ny volavolan-dalàna voalohany dia mametra ny fakàna sarimihetsika sy sarin'ny Tafi-Piarovana Isiraeliana (IDF), manasazy dimy taona an-tranomaizina ho an'izay rehetra voaheloka noho ny “fakàna horonantsary, sary, ary/na fandraketam-peon'ireo miaramila eo am-panaovana ny asany, miaraka amin'ny fikasana hanohintohina ny sain'ny miaramila IDF sy ny mponina ao Isiraely.” Raha manapa-kevitra ny fitsarana fa ny “hanimba” ny fiarovam-pirenena [Israeliana] no fikasan'ilay mpaka sary,” dia mety ho voasazy folo taona an-tranomaizina izy.
Ny volavolan-dalàna faharoa dia manafaingana ny dingana ho an'ny manampahefam-panjakana mangataka ny fanesorana ireo votoaty an-tserasera hita fa “mandrisika herisetra” amin'ny sehatra media sosialy, ary efa vonona hankatoavin'ny Knesset.
Mpikambana ao amin'ny Knesset, Robert Ilatov namaritra ny volavolan-dalàna voalohany ho valin'ny “fanorisorenana” ny miaramila Isiraeliana nataon'ny “hetsika elatra ankavia” tao amin'ny sisintanin'i Gaza-Israel, izay naparitaky ny manampahefan'ny IDF tamin-kerisetra ny hetsi-panoherana.
Hatramin'ny 30 martsa 2018, Palestiniana an'arivony monina ao Gaza natao fahirano no nivorivory tao amin'ny sisintany iarahana amin'i Israely mba hanao hetsi-panoherana ‘Diabe Goavana ho an'ny Fiverenana’, manamarika ny faha 70 taona hatramin'ny nanerena ireo Palestiniana 700.000 handositra nandritra ny fananganana ny firenena Isiraely, hetsika fantatra amin'ny hoe Nakba amin'ny teny Arabo (adika hoe loza na voina).+
Mitaky ny zo hiverina ho an'ireo nafindra toerana sy ny taranany, miaraka amin'ny famaranana ny fahirano Gaza nandritra ny 11 taona ireo mpanao hetsi-panoherana. Hatramin'ny nanombohan'ny hetsi-panoherana tamin'ny martsa 2018, namono mpanao fihetsiketsehana 138 farafahakeliny ary nandratra an'arivony ny tafika Israeliana.
Ny 6 Aprily, notifirin'ny tafika Israeliana i Yaser Murtaja, iray amin'ireo mpanorina ny sampam-baovao tsy miankina Ain Media (“mason'ny media”). Maty izy ny alin'iny noho ny ratra nahazo azy. “Tamin'izy voatifitra, dia nanao akanjo misy soratra hoe ‘Press’ izay ahafantarana azy mazava fa mpanao gazety izy,” hoy ny Reporter Without Borders.
Ny 25 aprily, namoy ny ainy noho ny bala nandratra azy tamin'ny kibony i Ahmed Abu Hussein, Palestiniana mpaka sary avy ao amin'ny Radio Voice of the People ao Gaza rehefa notifirin'ny tafika Israeliana tamin'ny 13 aprily izy raha nitantara ny hetsi-panoherana. Ny 8 Jona, voatifitra teo ambany tongony ilay mpaka sary ao amin'ny AFM, Mohammed al-Baba raha nitatitra ny hetsi-panoherana. Maro ihany koa ireo mpanao gazety hafa naratra.
Tamin'ny fanambarana tamin'ny 15 Mey, nametraka fangatahana tany amin'ny Fitsarana Iraisampirenena momba ny ady Heloka Bevava ny RSF mba hamotopototra ny “fitifirana mivantana nataon'ireo mpitsikilo IDF tamin'ireo mpanao gazety Palestiniana 20 teo ho eo nandritra ny fihetsiketsehana “Diaben'ny Fiverenana” tany Gaza.
Tamin'ny fanamarihany manazava ny volavolan-dalàna, dia manondro ny “trangan-javatra mampiahiahy amin'ny fandraketan-tsary sy am-peo ny miaramila Isiraeliana” ataon'ny fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana izay mandrakitra ireo fanitsakitsahana atao amin'ny Palestiniana.
Fikambanana iray tahaka izany ny Ivotoeran'ny Fampahalalam-baovao Isiraeliana ho an'ny Zon'Olombelona any amin'ny Faritra Bodoina, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe B'Tselem. Tamin'ny 4 Jolay, nosamborina ny talen'ny mpikaroka eny an-kianja B'Tselem, Kareem Jubran raha naka sary ny fanomanana ny fanesorana an-terisetra ny vondrom-piarahamonina Khan al-Ahmar, talohan'ny namotsorana azy tamin'io andro io ihany.
Efa miatrika fandrahonana sy famerana marobe ireo Palestiniana manohitra ny fibodoana, anisan'izany ny herisetra, ny fihazonana, ny fanagadrana sy ny lalàna manafay. Miatrika fisamborana sy fanenjehana noho ny fitarihana herisetra ireo izay mitodika amin'ny fampahalalam-baovao sosialy mba hanakiana ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona sy ny politikan'ny fibodoana israeliana na mba hampiseho fotsiny ny zava-misy iainana andavanandron'ny fibodoana.
Hampiakatra avo roa heny ny fomba fanao efa misy amin'ny fanenjehana ny olona noho ny fanehoan-kevitra an-tserasera sy mangataka amin'ireo orinasan'ny haino aman-jery sosialy mba hanaisotra izay votoaty voalaza fa mitarika korontana izany. Efa tsy ara-dalàna eo ambanin'ny fehezan-dalàna famaizana Israeliana tamin'ny taona 1977 sy eo ambanin'ny Fitsipika anaty tany misy hotakotaka 1945 ny fandrisihana herisetra.
Tamin'ny volana septambra 2016, nandrakitra fampiatoana kaonty manokana maromaro an'ireo Palestiniana mpanao gazety sy pejim-baovao ireo mpikatroka Palestiniana. Tonian-dahatsoratra efatra ao amin'ny Sampam-pahalalaham-baovao Palestiniana Shehab sy mpanao gazety telo avy ao amin'ny Al Quds News Network, izay samy manana mpanjohy an-tapitrisany, no nakatona ny kaontin'izy ireo manokana. Namaly ireo mpanohana, nanao hetsi-panoherana antserasera tamin'ny alalan'ny tenirohy #FBCensorsPalestine. Niala tsiny avy eo ny Facebook noho ny fampiatoana ary nilaza fa fahadisoana no nahatonga izany.
Milaza ireo mpitsikera fa manohintohina ny fahalalaham-pitenenana ilay volavolan-dalàna. Tati-baovao avy amin'ny Ivon-toerana Demokrasia Israely namintina fa mametraka “ohatra ara-pitsarana (dalàna) mampidi-doza” sy “manokatra ny varavarana ho an'ny loza ateraky ny sivana ataon'ny fanjakana” ny volavolan-dalàna.
Efa miatrika fiampangana “firaisana tsikombakomba” amin'ny fanivanana ny fanehoan-kevitra Palestiniana ireo orinasam-pampahalalam-baovao sosialy, indrindra indrindra fa ny Facebook. Iray amin'ireo niavian'ny volavolan-dalàna ny Minisitry ny Fitsarana, Ayelet Shaked, izay nanambara fa mifanaraka amin'ny ‘ankamaroan'ny fangatahan'ny fanjakana hanaisotra votoaty mitarika korontana’ ny Facebook.
Iràna 1 andro izay